Senator Cabdi Qaybdiid oo sheegay in dalka uu u baahanyahay is-bedel – Kalfadhi
Guddoomiyaha gudiga dastuurka ee Aqalka sare ee Baarlamanka Soomaaliya Senator Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid, oo ka hadlayay xaaladda dalka ayaa sheegay in dalka Soomaaliya uu u baahanyahay is-bedel.
“Dalka waxaa uu u baahanyahay is-bedel siyaasadeed, mid amni iyo mid dhinac wal-baba ah. Dalka hadda kuma shaqeynayo sidii dal amnigiisa lagu sugi lahaa, sidoo kale dariiqii dalka nabad uu ku noqon lahaa laguma socdo”, ayuu yiri guddoomiyaha.
Guddoomiyaha gudiga dastuurka ee Aqalka sare, ayaa aaminsan in dalka uu u baahanyahay dhaqo adag laga qabto dhinaca amnigiisa.
Amniga magaalada Mogadishu, ayaa waxaa dul hubanayay su’aalo dhowr ah, iyadoo magaalada ay kala xirantahay, inkastoo dowladda ay sheegtay in dhawaan la furayo waddooyinka magaalada.